गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ - डा. भीमार्जुन आचार्य - Sidha News
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ – डा. भीमार्जुन आचार्य
काठमाडौं। नेपालमा मैले अत्यन्त श्रद्धा गर्ने नेता हुनुहुन्छ – नारायणमान बिजुक्छेँ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई धेरै गहिराइमा बुझेर विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता उहाँ राख्नुहुन्छ । इमानको राजनीति गर्नुभयो । त्यसकारण म उहाँलाई धेरै श्रद्धा गर्छु । उहाँको पार्टीले उहाँलाई फेरि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसको लागि म उहाँलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु । उहाँको स्वास्थ्य धेरै लामो समय राम्रो रहोस् । उहाँको योगदान यो मुलुकले पाइरहोस् भनी कामना गर्न चाहन्छु ।
अहिलेको संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनतालाई यति धेरै अधिकार कहिल्यै पनि दिइएको थिएन । नेपालमात्र होइन, संसारकै संविधान अध्ययन गर्दा धेरै अधिकार दिने संविधानमा नेपालको संविधान दोस्रोमा पर्दछ । अधिकार दिनु छैन, त्यसकारण पृथ्वीमा सुनेका सबै अधिकार संविधानमा समावेश गरिएको छ । जस्तो, रोजगारीको अधिकार । रोजगारी नपाउनेलाई भत्ता दिने भनियो ।
संविधानमा कुनै कुरा सजावटको लागि लेखिंदैन, कार्यान्वयनको लागि लेखिन्छ । मौलिक अधिकार भनेको त सुनिश्चित गरिएको अधिकार भनिन्छ । जुन समय संविधान घोषणा हुन्छ, त्यही समयदेखि नै त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । शासक दलले निकै मजाक ग¥यो । म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु–जे नाम दिए पनि यदि जनताको त्यसमा विश्वास छैन भने त्यो कहिल्यै पनि टिक्दैन । संविधानको आयु भनेको जनताको आस्थामा निर्भर रहन्छ । संविधान बनाउँदा विधिको महत्व हुन्छ । बनिसकेपछि कुन विधिले बन्यो, त्यसको महत्व हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुुनुहुन्छ ।) (अनलाइनमजदुर)